Space Marshals 2 inowanikwa chete ma0,99 euros | IPhone nhau
Ignacio Sala | | IPhone mitambo, Kutengesa
Mumwe wemitambo yakasvika kuApp Store mumakore achangopfuura ndeye saga yeMahara Marshals, mutambo watinofanira kufamba mukati mayo renyeredzi. Space Marshals 2 ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye 5,99 euros, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuirodha pasi peyuro imwechete, 0,99 euros. Ichi chikamu chechipiri cheiyo yekutanga Space Marshals ndeye yepamusoro-pasi teki scooter iyo inoisa isu zvakare mune shangu dzehunyanzvi Burton kuti tirwisane nevose vanopara mhosva mugirazi. Kuve wehunyanzvi kupfura, iwe unofanirwa kuyedza kufunga nezve yega yega kufamba usati wadhirowa uye kutanga kupfura kuti utore vavengi.
Tinofanira kutora pekuhwanda kuti tirege kurwiswa. Tinofanirwa kurongedza vavengi vedu vasati vatikomberedza. Kubatsira kwedu kunobva pazvombo zvatichava nazvo zvakaita sekuparadzaniswa nemagirinedhi, kupofumadza magirinedhi, drones, turrets, zvimbambaira ... Kana zvasvika pakurwisa kubira, chombo chedu. Tinogona shandisa zvinokanganisa kupatsanura vavengi vedu nekuvabvisa mumwe nemumwe kuitira kuti boka riite diki uye rirerike kutora pasi.
1 Zvimiro zve Space Marshals 2
2 Space Marshals 2 ruzivo
Zvimiro zve Space Marshals 2
Tactical yepamusoro-pasi shooter.
Inotyisa uye inoyevedza HD mifananidzo uye Metal kupa.
20 mamishini ane ekuita-akavakirwa mibairo. TAMI iri kukutarisa!
Yakawanda sarudzo yezvombo nemidziyo. Zvinopfuura makumi manomwe zvombo zvakasiyana.
Mapoka mazhinji ekurwa ... kana kuti kuti varwisane.
MFi controller rutsigiro (inoda yakawedzerwa dhizaini)
Mikana yekuchengetedza mitambo muICloud.
Space Marshals 2 ruzivo
Saizi: 421 MB
Rated for makore 12 zvichikwira.
Inoenderana ne iPhone 5s zvichienda mberi, iPad Mini 2 zvichienda mberi, ese iPad Mhepo uye iPad Pro mamodheru pamwe neyechitanhatu chizvarwa iPod touch.
Inoda hushoma hweIOS 8.4 kana gare gare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Space Marshals 2 inowanikwa chete ma0,99 euros
Ini handinzwisise xk havabudi ku apple tv kunova iko kwaizotamba chaizvo.
Chipo Chinongedzo cheApple Vashandisi